I-Short.io: Isinqamuleli selebuli emhlophe ye-URL | Martech Zone
I-Short.io: Isifinyezi selebuli emhlophe ye-URL
ULwesine, May 7, 2020 ULwesithathu, May 6, 2020 Douglas Karr
Isikhathi esithile impela, bengibhaliswe ngensizakalo yokunciphisa ama-URL ami, kepha izindleko zohlelo zazibiza kakhulu. Ngisebenzisa isizinda sami siqu kubiza kakhulu kumodeli yabo yamanani. Eqinisweni, bengikhokhela okuningi nge-akhawunti yabo yokunciphisa i-URL kunokuba bengikhokhiselwa wonke amapulatifomu wokumaketha.
Bengingahle ngisebenzise inguqulo yamahhala lapho isizinda sami singahlelwanga ngokwezifiso, kepha II bengifuna abantu bathembe futhi babone i-URL ebengiyisabalalisa… kulokhu go.martech.zone. Ukubeka i-URL ejwayelekile ifulegi elibomvu kubantu abaningi abazi ukuphepha.
Kuthathe kuphela imizuzu embalwa ukuthola inqwaba yamathuluzi online, futhi Mfushane.io ivelele ngokushesha. Ngingamaka ilebula emfushane nge-subdomain yami - noma ngaphansi kwe-akhawunti yabo yamahhala! Hhayi lokho kuphela, empeleni banendlela yokufuduka isinqamuleli esidala uma ungakwazi ukuthumela nokungenisa idatha yakho… futhi ngaphandle kwenkokhiso.
NgeShort.io, ungayithola ibe ngumkhiqizo onamandla we-slug noma ungavele usebenzise inombolo nokwenyusa okuzenzakalelayo kwakho. Futhi, ungangena futhi wenze ngezifiso i-slug ukuthi ufisa kanjani uma ungathanda, futhi.
Isici esiyinhloko nokulandela umkhankaso we-Google Analytics Campaign. Indlela enhle yokusebenzisa isifinyezi se-URL ukunciphisa ubude be-URL ende lapho ufake nentambo yombuzo wakho we-UTM. NgeShort.io, konke lokhu kuyingxenye yezinketho kwi-URL yakho efushanisiwe ene-interface enhle ehlanzekile.
Okokugcina, iDemo.io inikezela nge Iphasiwedi ye-WordPress ukuze unciphise ngokuzenzakalela izixhumanisi zakho usebenzisa i-API yazo. Isici esihle ngempela!
Tags: kancaneisizinda ngokwezifisoI-google analyticsumkhankaso wokulandelela umkhankaso we-google analyticsi-url yokulandelela i-google analyticsi-short.cmmfushane.ioisicaphunai-url shortenerutmilebula elimhlophe
Izitayela Ezi-6 Zobuchwepheshe ngo-2020 Wonke Amamaki Okufanele Wazi Ngawo
Shoutem: Ipulatifomu Yokuthuthukisa Uhlelo Lokusebenza Olusebenza Kakhulu